Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa beeniyay warar maalmihii ugu dambeeyay la isla dhexmarayay, kuwaas oo sheegayay inuu jiro isu tanaasul ay isku afgarteen qaar ka mid ah musharaxniita tartanka madaxweynaha 10-aad ee Soomaaliya.
Qoraal uu soo dhigay bartiisa rasmiga ah ee Facebook, ayuu madaxweyne Shariif ku yiri "Waxaan had iyo goor aaminsannahay dimuqraadiyadda iyo in la galo tartan xor ah, ku salaysan aragti siyaasadeed iyo isbahaysi, taasoo aan waqti soo galinnay welina aan u taagannahay."
Bayaanka Shariif Sheekh Axmed ayaa intaas ku daray "Sidaa darteed waxaan rabaa inaan caddeeyo inaysan waxba kajirin wararka ku saabsan shir ay yeesheen waxgaradka iyo siyaasiyiinta beelaha mudullood oo lagu gaaray heshiis isku tanaasul ah oo la dhex dhigay murashaxiinta qaar."
Ma cadda in musharraxiinta la hadal hayay inay tanaasuleen uu shakhsiyan ka mid yahay.
Doorashada madaxweynaha Soomaaliya ayaa la qorsheeyey inay dhacdo 10-ka October 2021, hase yeeshee sida hadda jadwalka doorasho ku socdo waxaa suurta-gal ah inay dib uga dhacdo.
Qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka ayaan weli billaabin doorashada Aqalka Sare, oo qorshuhu ahaa in lasoo geba-gebeeyo 1-da August.
Kaliya laba maamul goboleed oo kala ah Jubaland Koonfur Galbeed ayaa billaabay doorashada Aqalka Sare, waxayna doorteen kala bar xubnaha kasoo galaya deegaanadooda.
Shariif Sheekh Axmed oo ah guddoomiyaha Midowga Musharraxiinta Madaxweynaha, ahna guddoomiyaha Xisbiga Himilo Qaran ayaa ka mid ah musharaxiinta ugu cad cad tartanka.